16,318,064 unique visits
Maxaad kala socotaa dhaq dhaqaaqyada suuqa kala iibsiga ee kooxda Chelsea iyo halka uu maraayo damaceeda
Kooxda Anderlecht ayaa xaqiijisay markii ugu horeysay inay wadahadalo kula jiraan Chelsea oo ku aadan sidii laacibkooda Romelu Lukaku ugu dhaqaaqi lahaa garoonka Stamford Bridge.
New York on June 18 2011 10:44:48 ·
· Wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga oo meel xasaasi ah maraaya "Qubano Xiiso Leh"
Maalin wanaagsan akhristayaasha sharafta leh waa Wargeysyada Yurub iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda oo maalinta walba aad kala socotaan shabakada ciyaaraha laacib.net
New York on June 18 2011 10:40:58 ·
Read More · 0 Comments · 1022 Reads
· Sidee ayu attaxyaadka Salaada ama (Tashahudka) ku bilowday?
Waliga ma is waydiisay sida uu Attaxyaadka Salaada aad tukato maalin walbo ku bilowday? Markii Nabiga (NNKH) la dheelmiyay Habeenkii Al-Isra wal-Micraaj
Shiil on June 18 2011 09:38:20 ·
Read More · 0 Comments · 3081 Reads
· Akhristayaasha Shabakadda Dhacdo.com oo fikirkooda ka dhiibtay go’aanka uu Farmaajo ku diiday in uu iscasilo
Akhristayaasha Shabakadda Dhacdo.com ayaa waxay si weyn ay uga fikirkooda uga dhiibteen sida ay u arkeen in Raa’isal Wasaaraha Maxamed C/Laahi Maxamed “Farmaajo” uu diiday in uu iscasilo.
Laacib on June 17 2011 23:16:02 ·
Read More · 0 Comments · 1348 Reads
· Banaanbax balaaran oo lagu taageeraayo Raa’isal Wasaare Farmaajo oo iminka ka soconaaya Gobolka Minisoto
Banaanbax balaaran oo lagu taageeraayo Raa’isal Wasaaraha Soomaaliya Maxamed C/Laahi Maxamed “Farmaajo” ayaa wuxuu goor dhaw uu ka bilowday magaaladda Minneapolis ee Gobolka Minisoto ee dalka Maraykanka.
Laacib on June 17 2011 22:28:49 ·
· Kororso Aqoontaada Su’aalo iyo Jawaabo oo Diini ah iyo Aqoon Guud “Barnaamij Xiiso Leh”
Waa barnaamij xiiso badan oo maalin kasta oo jimco ah aanu soo saari doono, iyadoo uu barnaamijkani noqon doono mid ay si’ weyn u xiiseeyaan qeybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed haddii uu RABI Idmo.
Laacib on June 17 2011 21:01:58 ·
Read More · 0 Comments · 3690 Reads
· Cabdi Raxmaan Janaqoow oo weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha cusub ee kooxda Al Qaacida
Cabdi Raxmaan Janaqoow oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwooda ugu afka dheer ayaa wuxuu weerar gaaban oo afka ah uu ku qaaday hogaanka cusub ee Al Qaacida ee shalay loo-magacaabay.
Laacib on June 17 2011 20:39:13 ·
Read More · 0 Comments · 1868 Reads
· Xarakada Al Shabaab oo sheegtay inay diyaar u tahay dagaalo culus oo ay la-gasho dowladda iyo Amisom
Xoogaga Xarakada Al Shabaab oo dagaalo faraha looga gubtay kula jira Dowladda Somaliya iyo Ciidamadda Midowga Afrika ee Amisom ayaa waxay sheegtay inay diyaar u tahay, dagaalo xoog leh oo ay la-gasho Dowladda iyo Amisom.
Laacib on June 17 2011 20:26:08 ·
Read More · 0 Comments · 1050 Reads
· Shabakadda Dhacdo.com oo dib u soo celineysa Barnaamijkii xiisaha badnaa ee Isha Dhacdooyinka Caalamka
Shabakadda Warbaahinta ee Dhacdo.com ayaa waxay dib ay u soo celineysaa barnaamijkii xiisaha badnaa ee Isha Dhacdooyinka Caalamka, kaa oo ay si weyn uga qeyb qaadan jireen lamaanaha Soomaaliyeed, ee dhibaatooyinka kala kulma intii ay wada socdeen amaba ay wada joogeen.
Laacib on June 17 2011 20:15:51 ·
· Banaanbaxyo waaweyn oo goor dhaw ka bilaaban raba magaaladda Cape Town ee dalka Koonfur
Banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageeraayo Raa’isal Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxay goor dhaw ay ka bilaaban doonaan magaaladda Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, iyadoo banaanbaxyada si weyn loo-soo qaban qaabiyay.
Goal Dhaliye on June 17 2011 15:20:26 ·
Read More · 0 Comments · 1192 Reads
· "Ninkii timir abuuriyo, ninkii tiin tallaalaba, taariikhdu waa warin" Al-Shariifeyn iyo Shabaabna Shideey shacabkii badeen
Meertada noloshu, waa mid isku xiriirsan oo leh qaab-wadaag dhamaystiran oo Ilaahay isku jaan-gooyay. Waa qaabab suurta-geliya jiritaanka-nololeed ee shay ku sugnaanayo, iyada ay ku xeeran yihiin caddawyo badan oo baadi-goob ugu jira sidii ay wax-yeelayn lahaayeen.
Goal Dhaliye on June 17 2011 14:38:30 ·
Read More · 0 Comments · 3867 Reads
· Dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo hub uruursi xoog leh oo ka soconaaya magaaladda Baladweyne
Kadib markii duleedka magaaladda Baladweyne ay weeraro xoog leh oo qorsheysan ay kusoo qaadeen dhinacyada Shabaab uga soo horjeeda gacan ku heynta Gobolka Hiiraan ayaa waxay Shabaab ay dhaq dhaqaaqyo ciidan ay ka wadaa gudaha magaaladda Baladweyne.
Goal Dhaliye on June 17 2011 11:19:46 ·
Read More · 0 Comments · 859 Reads
· Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in maal maha soo socda la-soo sii deen doono Barre Hiiraale Dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in maal maha soo socda la-soo sii deen doono Barre Hiiraale, iyadoo sheegtay in uu wada hadalo u socdo dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya.
Goal Dhaliye on June 17 2011 11:09:34 ·
Read More · 0 Comments · 846 Reads
· Maxaad ka taqaanaan taariikh nololeedkii Asxaabigii weynaa ee CABDULLAAHI BINU XUDAAFA AL-SAHMIYI?
Goal Dhaliye on June 17 2011 10:58:41 ·
· Maxaad ka taqaanaa Taariikhda Abii Daalib oo Nabiga "N.N.K.H" adeer u ahaa "Aqriso"
Abii-daalib wuxuu ahaa Nabiga SCW adeerkiisii soo koriyey toban sanana difaacayey oo qureysh uga biqi jirtey, muddo badanna ay odeyaashii qureysheed ku soo noqnoqdeen iyagoo uga dacwoonaya Rasuulka SCW dhibaatooyin badanna ka soo gaadheen difaaciddii Nabiga SCW iyadoo sababta uu u difaacayeyna ahayd ficilo qabiil iyo inaan wiilkuu adeerka u yahay lagu xad gudbin intuu nool yahay.
Goal Dhaliye on June 17 2011 10:55:39 ·
Read More · 0 Comments · 1654 Reads
· Kooxaha kubada cagta ee Liverpool iyo Manchester oo isku heesta ciyaaryahan kubad sameeya ah
Naadiga Man United ayaa ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa kabtan ka kooxda heerka labaad u sii dhaadhacday ee Blackpool Charlie Adam, sida ay qortay Daily Star.
Goal Dhaliye on June 17 2011 10:52:43 ·
Read More · 0 Comments · 730 Reads
· Kooxda Kubada Cagta ee Juventus oo la-soo wareegtay ciyaaryahan mustaqbal wanaagsan leh
Kooxda Juventus ayaa ku dhawaaqday inay la soo wareegtay ciyaaryahan Michele Pazienza kaasoo heshiis seddex sanno ah u saxiixay kooxda ka dhisan Turin.
Goal Dhaliye on June 17 2011 10:49:32 ·
· Soomaalida ku dhaqan dalka Tanzania oo loo-sameynaayo sharciyo ay ku jooggaan Tanzania
Midka mid ah ganacsatada ugu waaweyn Tanzania oo lagu magacawo Guleed (Garguurte) ayaa wazirka arimaha gudaha ee Tanzania kala hadlay inla siiyo sharciga deganaanshaha wadanka Tanzania. Laacib on June 16 2011 23:24:48 ·
· Lamaane Soomaaliyeed oo lagu xasuusan doono samafal iyo deeqsinimo "Waa kuwee lamaanahaasi"?
Duqii Hore ee Magaalada Muqdisho Md.Cabdullahi Muuse Xuseen iyo Jameeco la socota oo ka mid ah Jaaliyadda Holland oo kala ahaa Marwo Faaduma Caraay Miss.Xamdi Cali Maxamuud Miss.Shukri Maxamuud Lugayare Md.Cabdikariim Xussen Jiis Dr. Xasan Maxamuud Maxcamd ayaa waxaa ay gurigeeda ku soo booqdeen Maama Xaajiya Mako Xasan oo ah Marwadii uu ka geeriyoday Marxuum Xaaji Cumar Xasan Maxamuud (Cumar Istarliin) oo ah ahaa Aabihii Qoyska Soomaaliyeed oo ku caan baxay Samafalka. Laacib on June 16 2011 23:16:07 ·
Read More · 0 Comments · 1329 Reads
· Yuusuf Dabageed oo sheegay in maanta ay Xarakada Al Shabaab u galleen si wacdaro iyo cajiib leh
Dagaalada culus ee maanta ka dhacay qeybo kamid ah Gobolka Hiiraan ayaa waxaa guulo balaaran ka kala sheegtay dhinacyada isu haaya gacan ku heynta Gobolka Hiiraan oo idil.
Laacib on June 16 2011 22:39:47 ·
Read More · 0 Comments · 1550 Reads
· Dowladda Soomaaliya oo mushaaraad u qeybisay ciidamo kaga dhaawacmay dagaalada ay Shabaab kula jirto
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay maanta mushaaraad ay u qeybisay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaa oo ku dhaawacmay dagaalo ka dhacay qeybo kamid ah Gobolka Gedo.
Laacib on June 16 2011 22:04:57 ·
Read More · 0 Comments · 1043 Reads
· Page 514 of 789: 1...511512513514515516517...789